कतिखेर घाम ताप्दा भिडामिन डी पाईन्छ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कतिखेर घाम ताप्दा भिडामिन डी पाईन्छ
भिटामिन ‘डी’ को कमी हुँदा घाममा बस्नुपर्छ भन्ने त सबैले सुनेकै छौं । तर, कुन समय घाममा बस्नु उपयुक्त हुन्छ होला ? यसमा धेरै मानिसहरु दोधारमा परेको पाइन्छ । वास्तवमा दिउँसोको चर्को घाममा दिनहुँ आधा घन्टा बस्दा हाम्रो शरीरले पर्याप्त मात्रामा भिटामित ‘डी’ प्राप्त गर्दछ ।
शरीरमा भिटामिन ‘डी’ कमी हुँदा देखिने लक्षण
– मुड फ्रेस नहुने
– शरीर गलेको, थकित भएको जस्तो हुने
– जाँगर नआउने
– कसैकसैलाई टाउको दुख्ने
हाम्रो शरीरले भिटामिन ‘डी’ कसरी निर्माण गर्छ ?
जब सूर्यको किरणको (यूभी रे) हाम्रो छालामा ठोक्किन्छ । तब छालाको ठीक सतह मुनी रहेको कोलेस्ट्रोललाई भिटामिन डी ३ मा परिवर्तन गरिदिन्छ । जति चर्को घाममा बस्यो उति नै धेरै यूभी रे हुने हुँदा कोरेस्टेरोलबाट भिटामिन डी ३ मा बदलिने प्रक्रिया दिउँसो कडा काममा अझ राम्रोसँग हुने गर्छ । यसरी निर्माण भएको भिटामिन डी ३ कलेजोमा पुगेर केही प्रसोधित हुँदै मिर्गौलामा पुगेर थप प्रशोधित भएपछि मात्र शरीरमा काम गर्ने खालको भिटामिन डी ३ बन्छ ।
हामीले खानेकुराबाट पाएको वा भिटामिन डी पिल्सबाट लिएको भिटामिन डी पनि यसरी नै सुरुमा कलेजो हुँदै प्रशोधित भएपछि मिर्गौलामा गएर थप प्रशोधित भएर एक्टिभ फर्ममा बदलिन्छ ।
भिटामिन डीले के–के काम गर्छ ?
भिटामिन डीको सहायताले हाम्रो शरीरले आन्द्राको सतहबाट क्याल्सियम सोस्ने गर्छ । यदि भिटामिन डी पर्याप्त छैन भने शरीरले क्याल्सियम लिन सक्दैन र हड्डी कमजोर हुने, हड्डीमा छिद्रा पर्ने लगायत अन्य धेरै समस्याहरु देखा पर्न सुरु हुन्छ । यस्तै, दिमागको कोषहरुले नियमित काम गर्न र शरीरको इम्युन सिस्टम ले राम्रो काम गर्न पनि भिटामिन डी कै भूमिका रहन्छ । साथै, भिटामिन डी पर्याप्त हुने मानिसलाई रुघा खोकीको भाइरसले लामो समय दुःख दिन सक्दैन ।
भिटामिन डी पाइने खानाहरु
– भिटामिन डी मिसाइएको दुध
कसले खाने भिटामिन डी ?
– ५० वर्ष उमेर नाघेकाले
– जाडो समयमा माथि भनिएका लक्षण देखिनेहरुले
– रक्तजाँच गर्दा भिटामिन डी लेभल कम भएकाले
– कम घाम लाग्ने ठाउँमा बसोबास गर्नेले
भिटामिन ‘डी’ कति लिने कसरी लिने ?
सकेसम्म चिकित्सकको सल्लाहमा रक्तजाँच गरेर चिकित्सकै सल्लाहमा भिटामिन डी लिनु राम्रो हुन्छ । यदि चिकित्सकको पहुँच पुग्दैन र भिटामिन डी कमी भएको लक्षण देखिएकाहरुले जाडो समयका लागि मात्र दिनको ५००० आइयू लिँदा राम्रो हुन्छ । साथै, ५० वर्ष उमेर नाघेकाले दिनहुँ लिने हो भने दिनको १००० आइयू खानुपर्छ । यस्तो भिटामिन १–२ दिन खान छुट्दैमा कुनै असर हुँदैन ।